WARBIXIN: Carruurtii 500 oo sano ka hor ay waalidiintooda dileen iyagoo naftooda huraya! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WARBIXIN: Carruurtii 500 oo sano ka hor ay waalidiintooda dileen iyagoo naftooda...
WARBIXIN: Carruurtii 500 oo sano ka hor ay waalidiintooda dileen iyagoo naftooda huraya!
Qowmiyadda Chimú ayaa si joogto ah carruurtooda ugu huri jiray waxa ay aaminsan yihiin/ Photo: AFP
Peru (Halqaran.com) – Khubarada ku xeel dheer culuumta dhulka ee waddanka Peru ayaa soo saaray wax la aaminsan yahay inay tahay tiradii ugu badneyd ee carruur naftooda la quuray, kuwaasoo walidiintood ay hureen iyagoo nool.
Taariikhda caalamka lama xasuusto tiro ka badan midda hadda la helay.
Meydadka 227 carruur ah oo ay da’doodu u dhaxeyso 5 ilaa 14 ayaa laga soo saaray meel u dhow magaalo xeebeedka Huanchaco, oo u dhow caasimadda dalka Peru ee Lima.
Carruurtan ayaa la aaminsan yahay in naftooda la huray 500 oo sano ka hor.
Arrintan ayaa timid ku dhawaad hal sano ka dib markii meydadka 200 oo carruur ah oo kale, oo iyagana naftooda la huray laga helay labo meelood oo ka mid ah isla waddankaas.
Khubaradan ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in qaar ka mid ah meydadka la arkay ay wali ku yaallaan timo iyo maqaar.
Carruurtan waxaa ka muuqday astaamo caddeynaya in la dilay xilli cimiladu ay qabow ahayd, kaddibna la aasay iyagoo wajigooda loo jeedinayo dhinaca badda.
Arintaas ayaa sababteeda loo badiyay inay ahayd maadaama waalidiintooda “ay nafta carruurtooda u hureen iyagoo ugu dhawaanaya Ilaahyada ay aaminsanaayeen”
Hase ahaatee si rasmi ah looma oga sanadka ay arrintaas dhacday.
Falkaas carruurta lagu laayay waxaa sameeyay qowmiyadda Chimú ee dalka Peru, kuwaasoo xilligaas ahaa bulshada ugu awoodda badneyd gobolkaas xeebta u dhow.
Waxay qowmiyaddaas aad u soo caan baxeen intii u dhaxeysay sanadihii 1200 ilaa 1400, kaddibna waxaa ka awood badiyay qowmiyad kale oo lagu magacaabi jiray Incas.
Incas qudhoodana waxaa waagii dambe ka awood batay dadka Spanish-ka ah.
Waxaa hadda socda howlgallo kale oo aaggaas laga sameynayo, khubaraduna waxay filayaan inay helaan meydad kale oo dheeraad ah.
“Waa tiro xad dhaaf ah, meel kasta oo aad qoddo waxaad ugu tageysaa meydadka carruurta”, sidaas waxaa wakaaladda wararka ee AFP ku yiri madaxa khubarada oo lagu magacaabo Feren Castillo .